Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Nkwupụta ihe egwu CDC ọhụrụ na COVID Shot nke atọ
CDC malitere ulo oru
Agba nke atọ. Kedu ihe ọ pụtara maka omume ahụike ọha?
Dabere na akụkọ CDC a taa ihe ọ pụtara maka ahụike ọha o v-safe ahụghị usoro mmeghachi omume ọ bụla na-atụghị anya ya mgbe agbakwunyere ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ.
CDC kwere nkwa na ọ ga-aga n'ihu na-enyocha nchekwa ọgwụ mgbochi, gụnyere maka ịgbakwunye ọgwụ COVID-19 ọzọ.
Ọmụmụ CDC na nleba anya nchekwa nke mgbakwunye ọgwụ mgbochi COVID-19
Ihe amaralarị maka thọ bụ booster shot?
N'ime 306 ndị sonyere na nnwale ụlọ ọgwụ Pfizer-BioNTech, mmeghachi omume na-adịghị mma mgbe dose 3 dị ka nke ahụ mgbe ọgwụ 2 gasịrị.
Ihe agbakwunyere na akụkọ a na nọmba gbara 3 nke CDC wepụtara taa?
N'ime Ọgọstụ 12-Septemba 19, 2021, n'etiti ndị na-edebanye aha v-safe 12,591 ndị mechara nyocha nyocha ahụike mgbe ọgwụ 3 nke mRNA COVID-19, 79.4% na 74.1% kọrọ mmeghachi omume mpaghara ma ọ bụ sistemụ, n'otu n'otu, mgbe nke atọ; 77.6% na 76.5% kọrọ mmeghachi omume mpaghara ma ọ bụ sistem mgbe ọgwụ nke abụọ gachara.
Kedu ihe ga-eme maka ọrụ ahụike ọha na eze?
Akụkọ mkpesa afọ ofufo na v-safe ahụghị ụdị mmeghachi omume ọ bụla na-atụghị anya ya mgbe agbatịkwuru ọgwụ mgbochi COVID-19. CDC ga-aga n'ihu na-enyocha nchekwa ọgwụ mgbochi, gụnyere maka ịgbakwunye ọgwụ COVID-19.
N'August 12, 2021, Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) megharịrị ikike ikike iji ihe mberede (EUAs) maka ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech na Moderna COVID-19 iji nye ikike nchịkwa nke ọgwụ ọzọ mgbe emechara usoro ịgba ọgwụ mgbochi mbụ nye ndị tozuru etozu. ọnọdụ immunocompromising dị obere ma ọ bụ nke siri ike (1,2). Na Septemba 22, 2021, FDA nyere ikike ịgbakwunye ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech months ọnwa isii ka emechara usoro izizi n'etiti ndị gbara afọ 6, nọ n'ihe egwu dị elu maka COVID-65 siri ike, ma ọ bụ nke ikpughe ọrụ ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ na-etinye ha. nnukwu ihe egwu maka COVID-19 (1). Nsonaazụ sitere na nnwale ụlọ ọgwụ 3 nke Pfizer-BioNTech mere nke gụnyere mmadụ 306 gbara afọ 18-55 gosipụtara na mmeghachi omume ọjọọ mgbe anatachara ọgwụ nke atọ enyere ọnwa 5-8 ka emechara usoro ịgba ọgwụ mgbochi mRNA nke mbụ dị 2. ndị a kọrọ mgbe ha natasịrị dose 2; mmeghachi omume ọjọọ ndị a gụnyere saịtị ntụtụ dị nfe na oke na mmeghachi omume sistem (3). CDC mepụtara v-safe, afọ ofufo, sistemụ onyunyo nchekwa nchekwa ama ama, iji nye ozi na mmeghachi omume ọjọọ mgbe ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 gasịrị.
N'ikwekọ na ikike ị nweta ọgwụ ọzọ maka ndị nwere ọnọdụ mgbochi mgbochi, emelitere v-safe ka ndị debanyere aha tinye ozi gbasara ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ enwetara. N'ime August 12-Septemba 19, 2021, ngụkọta nke ndị na-edebanye v-22,191 kọrọ na ha natara ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ. Ọtụtụ (97.6%) kọrọ usoro usoro ịgba ọgwụ mgbochi mRNA 2 nke mbụ yana ọgwụ nke atọ nke otu ọgwụ mgbochi. N'ime ndị dechara nyocha nyocha ahụike maka usoro 3 niile (12,591; 58.1%), 79.4% na 74.1% kọrọ mmeghachi omume mpaghara ma ọ bụ sistemụ, n'otu n'otu, mgbe ọgwụ 3 gasịrị, ma e jiri ya tụnyere 77.6% na 76.5% bụ ndị kọrọ mpaghara ma ọ bụ sistemụ. mmeghachi omume, n'otu n'otu, mgbe ọgwụ 2. Nchọpụta mbụ ndị a egosighi enweghị atụmanya mmeghachi omume ọjọọ mgbe agbatịkwuru ọgwụ mgbochi COVID-19; imirikiti mmeghachi omume ọjọọ ndị a dị obere ma ọ bụ na -agafeghị oke. CDC ga-aga n'ihu na-enyocha nchekwa ọgwụ mgbochi, gụnyere nchekwa nke ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ, ma nye data iji duzie ndụmọdụ ọgwụ mgbochi yana ichebe ahụike ọha.
V-safe bụ sistemụ onyunyo nchekwa US nke afọ ofufo, nke sitere na ama; ndị ọgwụ mgbochi ruru eru ịnata ngwaahịa ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ikikere nwere ike ịdebanye aha na v-safe. Szọ nchekwa v-safe na-enye ohere ka ndị debanyere aha dị ugbu a kọọ akụkọ ịnata ọgwụ mgbochi COVID-19 na ndị debanyere aha ọhụrụ ịbanye ozi gbasara ọgwụ mgbochi COVID-19 niile enwetara. A na-eziga nyocha ahụike V nwere nchekwa n'ime ụbọchị 0–7 mgbe ọgwụ mgbochi ọ bụla gụnyekwara ajụjụ gbasara ebe ntụtụ mpaghara yana mmeghachi omume sistemụ yana mmetụta ahụike.* A na-eziga nyocha maka ntinye ọgwụ kacha ọhụrụ.† Ndị ọrụ sitere na Sistemụ Akuko Omume Vaccine Adverse (VAERS) kpọtụrụ ndị na -edebanye aha na -egosi na a chọrọ nlekọta ahụike mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ma gbaa ume ma ọ bụ kwado mmezu nke akụkọ VAERS, ma ọ bụrụ na egosiri ya.§
N'etiti ndị na-edebanye aha v-safe bụ ndị kọrọ nnata nke ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ n'oge Ọgọst 12-Septemba 19, 2021, data igwe mmadụ, mmeghachi omume mpaghara na sistem, yana mmetụta ahụike a kọrọ n'oge ụbọchị 0-7 ka ejiri usoro ịgba ọgwụ mgbochi kọwaa (ya bụ. , onye na -emepụta ọgwụ mgbochi enwetara maka ọgwụ ọ bụla). Ndị mmadụ kwuru na ha natara usoro izizi sitere n'aka ndị nrụpụta dị iche iche ma ọ bụ onye nrụpụta nke amabeghị ma ọ bụ adịghị na United States, ma ọ bụ ọgwụ mgbochi 2 mgbe ha nwetasịrị ọgwụ mgbochi otu mkpụrụ (Janssen (Johnson & Johnson)) ewepụrụ na nyocha ahụ. nke mmeghachi omume na -adịghị mma mgbe nnata nke ọgwụ ọzọ.
A kọwara oge gafere site na mmecha usoro ịgba ọgwụ mgbochi izizi ruo nnata nke ọgwụ ọzọ site na usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Atụnyere profaịlụ ihe omume ọjọọ mgbe usoro 2 na 3 gasịrị maka ndị debanyere aha ha nwetara ọgwụ mgbochi mRNA site n'otu onye nrụpụta maka ọgwụ 3 niile.¶ Ejiri sọftụwia SAS (ụdị 9.4; SAS Institute) mee nyocha niile. CDC nyochara ihe nlele ndị a wee duzie ya na iwu gọọmentị etiti yana amụma CDC. **
N’ọnwa Ọgọst 12-Septemba 19, 2021, ngụkọta nke ndị na-edebanye v-safe 22,191 kọrọ na ha natara ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ mgbe ha mechara usoro izizi (Isiokwu 1). N'ime ndị a, 14,048 (63.3%) bụ ụmụ nwanyị, na ihe dịka 30% onye ọ bụla dị afọ 18-49, 50-64, na afọ 65-74.
Ọtụtụ ndị debanyere aha (21,662; 97.6%) kọrọ na ha nwetara ọgwụ nke atọ site na otu onye nrụpụta dị ka usoro ịgba ọgwụ mgbochi mbụ mRNA ha, gụnyere 98.6% nke ndị nnata Moderna na 98.2% nke ndị nnata Pfizer-BioNTech. Ole na ole ndị debanyere aha (341; 1.5%) kọrọ usoro ọgwụ mgbochi mRNA nke mbụ sochiri ọgwụ mgbochi mRNA ọzọ sitere n'aka onye nrụpụta dị iche iche, ọgwụ mgbochi Janssen mgbe ọ nwetasịrị usoro ịgba ọgwụ mgbochi mRNA nke mbụ (10; 0.05%), ma ọ bụ ihe ọzọ Ọgwụ mgbochi COVID-19 sitere n'aka onye nrụpụta ọ bụla mgbe ọgwụ mgbochi Janssen (178; 0.8%).
N'ime ndị na-edebanye aha v 22,191 dị mma 19, etiti etiti site na mmecha usoro ịgba ọgwụ mgbochi COVID-182 ruo nnata nke ọgwụ ọzọ bụ ụbọchị 160 (mpaghara etiti [IQR] = ụbọchị 202–XNUMX) (Isiokwu 2). N'ime ndị natara ọgwụ mgbochi Janssen 2, oge etiti n'etiti doses dị mkpụmkpụ (ụbọchị 84; IQR = 16-136 ụbọchị).
A na-ekwukarị mmeghachi omume mpaghara (16,615; 74.9%) na sistem (15,503; 69.9%) n'izu mgbe agbatịkwuru ọgwụ mgbochi COVID-19, nke a na-emekarị n'ụbọchị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Mmeghachi omume a na -ekwukarị bụ mgbu saịtị saịtị (15,761; 71.0%), ike ọgwụgwụ (12,429; 56.0%), na isi ọwụwa (9,636; 43.4%).
N'ime 22,191 ndị natara ọgwụ ọzọ, ngụkọta nke 7,067 (31.8%) kọrọ mmetụta ahụike, yana ihe dịka 28.3% (6,287) kọrọ na ha enweghị ike ịrụ ọrụ kwa ụbọchị, ọkachasị n'ụbọchị ka ịgba ọgwụ mgbochi gasịrị. Ndị na -edebanye aha 401 (1.8%) chọrọ nlekọta ahụike, mmadụ iri na atọ (0.1%) nọ n'ụlọ ọgwụ. Achọpụtaghị ihe kpatara ị nweta nlekọta ahụike ma ọ bụ ụlọ ọgwụ na nyocha v-safe; agbanyeghị, ndị debanyere aha na -egosi na a chọrọ nlekọta ahụike mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ka ndị ọrụ VAERS kpọtụrụ ma gbaa ha ume ka ha mezue akụkọ VAERS.
N'ime 21,658 ndị na-edebanye aha v-safe nke nwetara otu ọgwụ mgbochi mRNA maka ọgwụ 3 niile, 12,591 (58.1%) dechara opekata mpe nyocha nyocha ahụike n'ụbọchị 0–7 ka emechara usoro 3 niile; 79.4% na 74.1% kọrọ mmeghachi omume mpaghara ma ọ bụ sistemụ, n'otu n'otu, mgbe ọgwụ 3 gasịrị, ma e jiri ya tụnyere 77.6% na 76.5% bụ ndị kọrọ mmeghachi omume mpaghara ma ọ bụ sistem, n'otu n'otu, mgbe ọgwụ 2. N'etiti ndị debanyere aha ha natara Moderna 3 (6,283), mpaghara A na-akọkarị mmeghachi omume ugboro ugboro mgbe ọgwụ 3 karịa dose 2 (5,323; 84.7% na 5,249; 83.5%; p-value = 0.03) (ọnụ ọgụgụ). A kọọrọ mmeghachi omume sistemụ obere oge mgbe ọgwụ 3 gafere dose 2 (4,963; 79.0% na 5,105; 81.3%; p-value <0.001).
N'ime ndị debanyere aha ha natara ọgwụ 3 nke Pfizer-BioNTech (6,308), a na-akọkarị mmeghachi omume mpaghara ugboro ugboro mgbe oke 3 karịa dose 2 (4,674; 74.1% na 4,523; 71.7%; p-value <0.001). Achọpụtabeghị mmeghachi omume sistemụ ugboro ugboro mgbe dose 3 karịa dose 2 (4,363; 69.2% na 4,524; 71.7%; p-value <0.001). N'ime ndị kọrọ ihe mgbu mgbe ọgwụ 3 nke ọgwụ mgbochi mRNA, ọtụtụ mmeghachi omume dị nro (4,909; 51.4%) ma ọ bụ na -adịchaghị (4,000; 41.9%); 637 (6.7%) kọrọ nnukwu ihe mgbu (akọwapụtara dị ka mgbu na -eme ka ihe omume kwa ụbọchị sie ike ma ọ bụ agaghị ekwe omume).
Ka ọnwa Septemba 19, 2021, ihe dị ka nde mmadụ 2.21 nọ na United States natara ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ†† mgbe emechara usoro izizi. Site na Ọgọstụ 12 ruo Septemba 19, 2021, enweghị ụdị mmeghachi omume na-atụghị anya ya n'etiti 22,191 ndị na-edebanye aha v-safe nke nwetara ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ. Ọtụtụ mmeghachi omume mpaghara na sistem dị nwayọọ ruo obere, na -agafe agafe, ma na -akọkarị kwa ụbọchị ụbọchị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ọtụtụ ndị debanyere aha ndị natara ọgwụ ọzọ kọrọ akụkọ usoro ịgba ọgwụ mgbochi mRNA nke mbụ na -esokwa usoro nke atọ site n'aka otu onye nrụpụta.
Nnwale ụlọ ọgwụ Pfizer-BioNTech, nke gụnyere mmadụ 306 gbara afọ 18-55, gosipụtara na mmeghachi omume mgbe dose 3 dị ka nke a kọrọ mgbe emechara 2.3). Agbanyeghị, nyocha nke data nchekwa v chọpụtara na mmeghachi omume mpaghara bụ nke a na-ahụkarị na mmeghachi omume sistemụ anaghị adịkarị mgbe dose 3 nke Pfizer-BioNTech.
Usoro nke mmeghachi omume na-adịghị mma a hụrụ mgbe dose 3 nke ọgwụ Moderna ma ọ bụ Pfizer-BioNTech kwekọrọ na mmeghachi omume akọwaburu na mbụ mgbe ị natasịrị ọgwụ 2.
Ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gosiri na ha natara ọgwụ mgbochi Janssen 2 ma ọ bụ nata ọgwụ ọzọ site n'aka onye nrụpụta dị iche na nke usoro izizi ha dị obere, na -amachi nkwubi okwu ọ bụla.
Data gbasara nchekwa ma ọ bụ ịdị irè nke ịgba ọgwụ mgbochi yana ọgwụ mgbochi COVID-19 sitere na ndị nrụpụta dị iche iche nwere oke; Kọmitii Na-ahụ Maka Omume Ịgba Mgbochi Ọrịa (ACIP) na-atụ aro ka ndị nwere ọnọdụ adịghị ike dị oke ala na-enweta ọgwụ mgbochi mRNA COVID-19 nke atọ site na otu onye nrụpụta dị ka usoro izizi ha.
Nkwado CDC maka ị nweta ọgwụ ọzọ agunyeghi ndị nwetara ọgwụ mgbochi Janssen ugbu a.
N'ime oge ọmụmụ a kpuchiri, ndụmọdụ ACIP maka ịgbakwunye ọgwụ mgbochi COVID-19 bụ naanị ndị nwere ọnọdụ mgbochi ọrịa siri ike nke nwetagoro.
2 doses nke ọgwụ mgbochi mRNA.
Nnyocha e mere n'etiti ndị ọrịa hemodialysis immunocompromised kọrọ na mmeghachi omume mpaghara na sistem mgbe ọgwụ 3 nke ọgwụ Pfizer-BioNTech yiri nke ahụ ka emechara ọgwụ 2.Ebere Akụkọ banyere ọrịa na-efe efe n'ime ndị a gbara ọgwụ mgbochi na mmụba nke mgbasa nke ụdị B.1.617.2 (Delta) nke SARS-CoV-2, nje na-ebute COVID-19, n'etiti ndị nwere ọgwụ mgbochi nwere ike ịkpali ụfọdụ mmadụ ịchọ. mgbakwunye ọzọ na -abụghị ndụmọdụ. Oge etiti etiti site na mmecha nke usoro izizi ruo nnata nke ọgwụ ọzọ bụ ihe dịka ọnwa 6; ya mere, ndị mmadụ butere ụzọ n'oge mwepụta ọgwụ mgbochi COVID-19, gụnyere ndị ọrụ nlekọta ahụike na ndị okenye, nwere ike nweta ọgwụ ọzọ.
Nchọpụta dị na akụkọ a nọ n'okpuru opekata mpe anọ. Nke mbụ, ịdenye aha na v-safe bụ nke afọ ofufo ma eleghị anya ọ bụghị onye nnọchite anya ndị US ọgwụ mgbochi; imirikiti ndị sonyere kọwara onwe ha dị ka ndị ọcha na ndị na-abụghị ndị Hispanik. Nke abụọ, n'oge oge ọmụmụ a, ntinye ọgwụ ndị ọzọ bụ naanị ndị nwere ọrịa mgbochi ọrịa nke mechara usoro mgbochi mRNA COVID-19 nke mbụ; agbanyeghị, v-safe anaghị etinye ozi gbasara ọnọdụ mgbochi.
Ndị nnata dose ọzọ nwere ike ịgụnye ndị nwere ọnọdụ immunocompromising na enweghị. Nke atọ, enweghi ike ịtọlite ​​mmekọrịta dị n'etiti ọgwụ mgbochi yana ihe ọjọọ dị njọ nke ụlọ ọgwụ kwuru mgbe ịgba ọgwụ mgbochi site na iji data nchekwa. N'ikpeazụ, enweghị data zuru oke iji chọpụta usoro mmeghachi omume na -adịghị mma mgbe ị natasịrị ọgwụ ọzọ n'aka onye nrụpụta dị iche na usoro izizi ma ọ bụ maka ọgwụ mgbochi Janssen.
A na-atụ aro maka ịgba ọgwụ mgbochi mRNA COVID-19 ọzọ maka ndị nwere ọnọdụ immunocompromising siri ike (5).
CDC tụrụ aro ka ịgbakwunye ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech months ọnwa isii ka emechara usoro ọgwụ mgbochi nke mbụ n'etiti ndị gbara afọ 6, ndị nọ na nlekọta nlekọta ogologo oge, yana ndị gbara afọ 65–50 nwere nsogbu ahụike; ndị gbara afọ 64-18 nwere ọrịa ahụike yana ndị gbara afọ 49-18 nọ n'ihe egwu dị elu maka ikpughe na mbufe COVID-64 n'ihi ọnọdụ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike nweta ọgwụ ọzọ dabere na uru na ihe egwu ha n'otu n'otu.
Nyocha izizi nke data nchekwa sitere na> 22,000 ndị na-edebanye aha v-safe na-egosi na mmeghachi omume mpaghara na-abawanye ntakịrị na mmeghachi omume sistemụ na-agbada ntakịrị mgbe dose 3 nke mRNA karịa mgbe ọgwụ 2 gasịrị.
Achọpụtaghị usoro nke mmeghachi omume na -atụghị anya ya; ndị a kọrọ bụ ndị dị nwayọọ na ndị na -agafe agafe na ndị na -agafe agafe. CDC ga-aga n'ihu na-enyocha nchekwa nke ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ. Ozi ndị ọzọ gbasara mmeghachi omume na -adịghị mma jikọtara ya na njikọta ọgwụ mgbochi dị iche iche yana oge kemgbe emechara usoro izizi ga -adị mkpa iji duzie ndụmọdụ ahụike ọha.
Janssen,%†, (n = 178)
Usoro 3 Moderna
Nkeji 3 Pfizer-BioNTech
Nkeji 3 Janssen
Nkeji 2 Janssen
Usoro 2 Moderna
Nkeji 2 Pfizer-BioNTech
Nwoke 35.1 34.0 50.0 36.1 36.0 66.7 60.4 42.2 40.9 35.7
Ndị otu, afọ
Asụsụ Hispanik / Latino 8.0 15.3 0 8.2 5.6 0 25.0 6.3 10.6 8.2
Onye na-abụghị Hispanic/Latino 87.7 81.9 100 87.6 90.9 100 54.2 89.1 89.4 87.6
Otutu 1.9 2.1 0 1.8 1.5 16.7 4.2 4.7 3.0 1.9
Ndị ọzọ 2.1 4.2 0 2.1 0.5 0 6.3 1.6 3.0 2.1
Mmebi okwu: AI/AN = American Indian/Alaska Native; NHPI = Nwa amaala Hawaii ma ọ bụ agwaetiti Pacific ọzọ.
* Pasentụ ndị debanyere aha ha dechara opekata mpe nyocha nyocha ahụike v-safe n'ụbọchị 0-7 mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa gasịrị.
† Usoro ịgba ọgwụ mgbochi nke mbụ.
§ Gụnyere ndị natara ọgwụ mbụ Janssen na otu ọgwụ mgbochi ọzọ site n'aka ndị nrụpụta edepụtara.
Janssen,%†, (n = 174)
Days kemgbe usoro izizi, median (IQR) 182 (164 - 198) 183 (161 - 204) 173 (141 - 182) 183 (157 - 209) 186 (161 - 217) 123 (113 - 182) 84 (16 - 136) 156 (140 - 164) 150 (136 - 167) 182 (160 - 202)
Mmeghachi omume saịtị ọ bụla 80.9 64.6 75.0 69.4 81.7 83.3 25.0 70.3 80.3 74.9
nācha ọbara-ọbara 25.2 8.3 0 9.8 20.8 16.7 6.3 7.8 12.1 17.1
ọzịza 33.6 17.4 0 16.8 30.5 16.7 6.3 12.5 18.2 24.8
Mmeghachi omume ọ bụla 75.2 59.7 50.0 65.1 76.1 100 31.3 68.8 63.6 69.9
abdominal mgbu 8.4 3.5 0 6.4 8.1 16.7 4.2 3.1 6.1 7.3
Egwu 31.3 8.3 50.0 17.5 33.5 50.0 8.3 23.4 10.6 24.1
afọ ọsịsa 9.9 7.6 0 9.0 9.6 16.7 8.3 6.3 9.1 9.4
ike ọgwụgwụ 61.8 44.4 0 51.0 60.9 83.3 14.6 48.4 50.0 56.0
ahụ ọkụ 36.4 20.1 50.0 22.2 37.1 50.0 6.3 37.5 12.1 29.0
isi ọwụwa 49.0 31.1 0 38.4 49.7 83.3 18.8 35.9 40.9 43.4
nkwonkwo mgbu 33.0 18.8 0 23.0 31.0 33.3 16.7 20.3 19.7 27.7
ọgbụgbọ 18.8 10.4 25.0 13.6 21.3 33.3 8.3 9.4 18.2 16.1
Mmetụta ahụike ọ bụla 39.2 19.4 0 25.2 39.1 33.3 16.7 28.1 24.2 31.8
Enweghi ike ịme ihe omume kwa ụbọchị 35.2 18.1 0 22.1 33.0 33.3 10.4 25.0 15.2 28.3
Enweghị ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ ịga ụlọ akwụkwọ 13.7 4.9 0 9.0 21.3 16.7 10.4 6.3 13.6 11.3
Achọrọ nlekọta ahụike 2.1 1.4 0 1.5 3.0 0 6.3 0 0 1.8
Ụlọ akụ 0.9 0.7 0 0.7 1.0 0 2.1 0 0 0.8
Ọgwụ 0.7 0.7 0 0.6 0.5 0 4.2 0 0 0.6
Nleta mberede 0.2 0 0 0.2 0 0 4.2 0 0 0.2
Ụlọ ọgwụ 0.05 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
EGO. Mmeghachi omume ọjọọ na mmetụta ahụike sitere na ndị natara ọgwụ 3* nke Moderna (N = 6,283) ma ọ bụ Pfizer-BioNTech (N = 6,308) ọgwụ mgbochi COVID-19 wee mezue opekata mpe nyocha nyocha ahụike v-safe na ụbọchị 0- 7 mgbe ọgwụ ọ bụla gachara, site na nọmba dose - United States, August 12 – Septemba 19, 2021